MMNearBy APK Download - Free Productivity APP for Android | APKPure.com
Home » Productivity » MMNearBy
Using APKPure App to upgrade MMNearBy, fast, free and save your internet data.
The description of MMNearBy
Myanmar (formerly Burma), isaSoutheast Asian nation of more than 100 ethnic groups, bordering India, Bangladesh, China, Laos and Thailand. Yangon (formerly Rangoon), the country's largest city, is home to bustling markets, numerous parks and lakes, and the towering, gilded Shwedagon Pagoda, which contains Buddhist relics and dates to the 6th century.
About Myanmar NearBy MMNearBy (မြန်မာ့အနီးအနား)
You can use MMNearBy (မြန်မာ့အနီးအနား) on the web and on mobile, just like the tens of thousands who use it every day. Want to find the nearest ATM, DrugStore, Cafe & Tea? You will get it literally at your fingertips!
With MMNearBy (မြန်မာ့အနီးအနား), you can find points of interest near you. We also continually update these points of interests and include more details for your information-seeking pleasure. These include operating hours, descriptions and relevant rates.
MMNearBy ကိုပြုလုပ်ထားရှိရသော ရည်မှန်းချက်မှာ ယနေ့ခေတ် ကမ္ဘာတွင် အသုံးပြုလျက်ရှိသော လက်ကိုင်ဖုန်း သုံးစွဲသူများအားလုံး အတွက် လိုအပ်သော သတင်း အချက်အလက်ကို တိုတောင်းလှသော အချိန်အတွင်း ရရှိစေရန် ရည်ရွယ် ထားရှိပြုလုပ်ပေး ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ယခုအခါတွင် မြန်မာပြည် အထူးသဖြင့် ရန်ကုန်မြို့ အတွင်းတွင် လူငယ်ပိုင်း အပါအဝင်၊ လူကြီးများပါ လက်ကိုင်ဖုန်းများဖြင့် အင်တာနက်မှတဆင့် သတင်းအချက်အလက်များကို လွယ်ကူစွာ အသုံးပြုနေသည်ကို နေရာ အနှံအပြားတွင် တွေ့ ရှိနေရပါသည်။ နိုင်ငံတကာ၏ ဈေးကွက်သုသေသန အရ ရန်ကုန်မြို့ တွင် နေစဉ် အင်တာနက်အသုံးပြုသူ ခန့် မှန်းချေ ၁.၅ သန်း ရှိနေ ပြီဖြစ်သည်။ ငှင်းကောင်အပြင် ပြည်ပ ခရီးသွား ဧည်သည်များလည်း နေစဉ်တိုးတတ် ဝင်ရောက်လာပြီး ငှင်းတို့ ၏ အနီးအနားတွင် သိရှိလိုသော အချက်အလက်များကို အင်တာနက်မှ တဆင့်သာ ရှာဖွေနေသည်ကို မြင်တွေ့ နေရပါသည်။
မိမိတို့သိရှိလိုသော ကုမ္ပဏီ၊လုပ်ငန်း၊ ဆိုင်များ၊ ဟိုတယ်၊ စိတ်ဝင်စား စရာ နေရာများ၊ အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးနေရာများ၊ ကော်ဖီဆိုင်ဈေး နေရာများ၊ ဆေးရုံများ၊ အစရှိသည့်နေရာများ ၏ လိပ်စာများကို လက်ကိုင်ဖုန်းထဲ၌ ရှာဖွေပြီးအသုံးပြုနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးထားသောတယ်လီဖုန်း အသုံးချလမ်းညွန် ဖြစ်ပါသည်၊၊
Location-based services at your fingertips!
· Find points of interests near you
· Auto-detect or manually set your location
· Bookmark your favorite places
· Manage and add categories on your app
· View descriptions of points of interests such as operating hours and rates
· Get bus information and timings at bus stops.
· Navigate to your destination
· Request for promotions
You have the option to indicate your preference and subscribe to promotions at specific points of interest!
· Feel free to share your feedback and suggestions with MMNearBy
· You will receive prompt replies with our staff
· Your feedback is compiled in an FAQ to benefit other users
· A user-focused medium for users
Your ideas are deeply appreciated and taken into consideration when we improve the app
You can see your contributions and suggestions in the app such as new points of interest – e.g. newly opened shops, closed shops or shops with change in details.
MMNearBy APK Version History
MMNearBy 0.0.0.29 for Android 4.1+ APK Download
Version: 0.0.0.29 (159) for Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)
APK File SHA1: b544ea968b3d14c58e8a3867c766878d794cd6ce
MMNearBy 0.0.0.26 for Android 4.1+ APK Download
Version: 0.0.0.26 (137) for Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)
APK File SHA1: b993f06cc9399a6aec51bca66d37ea30286d278f